Somali News 07.16.21 | KWIT
Sahan cusub oo bille ah oo lagu sameeyo baananleyda qeybaha miyiga 10 Meelood iyo gobollada Galbeedka ayaa soo jeedinaya sii socoshada kobaca dhaqaalaha ee gobolka, inkasta oo shaqooyinka aan caadiga ahayn ee inta badan gobolladaas ay ka hooseeyaan heerarka cudurrada faafa. Isugeynta guud ee Miyiga Mainstreet wuxuu hoos ugu dhacay 65.6 bishii Luulyo laga bilaabo Juun 70.0. Dhibco kasta oo ka sareysa 50 waxay soo jeedinaysaa koritaan.
Haraadiga sagaal caruur ah oo loo yaqaan Rosebud Sioux ayaa dib loogu celinayaa dalkooda kadib inka badan 140 sano oo ay ka maqnaayeen dalkooda.
Carruurta ayaa laga helay Carlisle Barracks oo ku taal Carlisle, Pennsylvania, oo ah goobtii hore ee Iskuulka Warshadaha ee Carlisle Indian. Waxaa lafilayaa inay maanta gaaraan South Dakota, kahor intaan lagu aasin Rosebud Sioux Reservation berri subax.
Dib-u-celinta waxay dhacdaa waqti ay dad badan oo asaliga ah ay ka codsanayaan dowladda Mareykanka in ay dib ula heshiiso taariikhdeedii hore ee ahayd in carruurta asaliga ah laga fogeeyo qoysaskooda si qasab looga dhigo bulshada cad.